Multi Game Card $10 USD ~ ICT.com.mm
HomeMulti Game Card $10 USD
Multi Game Card $10 USD
Multi Game Card isaleading cash-based alternative payment platform for online games, virtual goods and digital content. MGC, abbreviated from Multi Game Card, provides an easy way for users to access multiple games around the world.
Multi Game Card ( USD $10 တန်) ဖြစ်ပါတယ်။ Multi Game Card ဆိုတာက အင်တာနက်ပေါ်မှာရှိတဲ့ ဂိမ်းတွေ၊ ဒီဂျစ်တယ်ထုတ်ကုန်တွေအတွက် ငွေပေးချေဖို့အသုံးပြုနိုင်တဲ့ ဂိမ်းကတ်ဖြစ်ပါတယ်။ Multi Game Card ကို လက်ခံတဲ့ ဂိမ်းနဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေမှာ Payment အတွက် Multi Game Card ကို ရွေးချယ်ပေးပြီး ညွှန်ကြားချက်တွေအတိုင်း ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ကာ စတင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ ဂိမ်းစာရင်းကို https://www.multigamecard.com/site/where-to-use မှာလည်း သွားရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။